Mohamady - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Mohameda)
Teraka 22 Aprily 571
Maty 8 Jiona 632
I Mohamady (amin' ny teny arabo محمّد / Muḥammad) dia mpitondra ara-pivavahana sy ara-pôlitika ary ara-tafika arabo avy amin'ny foko Quraysh. Amin'ny finoana silamo dia izy no mpaminanin' Andriamanitra. Teraka tao Maka (na Meka) izy tamin'ny taona 570 ary maty tao Madina tamin'ny taona 632. Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim, no anatany feno.
1 Ny fianakavan'ny mpamiany
2.1 Ny asa faminaniana
2.2 Tonga mpanapaka
3 Ny fampianarany
5.1 Kor'any amin'ny teny farantsay (Wikisource):
5.2 Kor'any amin'ny teny anglisy (Wikisource):
5.3 Kor'any amin'ny teny malagasy
Ny fianakavan'ny mpamianyModifier
I Abd Allah ibn Abd al Muttalib no rain' i Mohamady.
Ny vadiny dia i Khadijah bint Khuwaylid, i Sawda bint Zamʿa, i Hafsa bint Umar, i Juwayriyya bint al-Harith, i Aisha, i Zaynab bint Jahsh, i Safiyya bint Huyayy, i Zaynab bint Khuzayma, i Umm Salama Hind bint Abi Umayya, i Ramla bint Abi Sufyan, i Rayhana bint Zayd ibn ʿAmr, i Maria al-Qibtiyya ary i Maymuna bint al-Harith.
Ny zanany dia i Qasim ibn Muhammad, i Ibrahim ibn Muhammad, i Zainab bint Muhammad, i Ruqayyah bint Muhammad, i Umm Kulthum bint Muhammad ary i Fatimah.
Ny asa faminanianaModifier
Nanomboka ny asa faminaniany i Mohamady tamin’ ny faha-40 taonany rehefa niseho taminy ny anjely Gabriela (Jibril amin’ny teny arabo) nandritra ny fahitana, araka ny lovantsofina. Nambaran’ i Mohamady tamin’ ny fianakaviany sy tamin’ ny namany akaiky ny antsipirian’ izany fanambaràna izany. Rehefa tapitra ny efapolo taona dia olona efapolo no voataonany hanaraka ny fivavahany. Tamin’ izany no nanombohany nitory teny imasom-bahoaka tao amin’ ny tanànan’ i Maka, nahaterahany. Noho ny tsy fankasitrahan’ ny mponin’ i Maka dia niala tao izy tamin’ ny taona 622 ka nankany Iatriba (Yathrib), izay atao hoe Madina (na Medina) ankehitriny. Izay fifindrà-monina izany no atao hoe Hijra, sady fiandohan’ ny fanisan-taona miozolmàna.
Tao Iatriba (na Madina) i Mohamady dia tonga nanam-pahefana ara-pôlitika sy ara-pivavahana. Resiny ny Arabo sy Jiosy mpanohitra azy tao Madina, avy eo dia niady tamin’ ny tanànan’ i Maka izy. Nitombo isa ireo foko arabo nanaiky ny hofehezin’ i Mohmady ary nilavo lefona i Maka tamin’ ny taona 630. Maty tamin’ ny taona 632 i Mohamady. Nahatsangana fanjakana arabo izay nitombo hery sy velarana haingana izy.
Ny hatsaram-panahy sy ny fahefan’ Andriamanitra ny zava-drehetra ary ny maha tokana an’ Andriamanitra, ary koa ny tokony haha malala-tanana sy marina amin’ ny fifandraisana amin’ ny samy olona no fampianarana lehibe nataon’ i Mohamady. Maro ireo lohahevitra avy amin’ ny jodaisma sy ny kristianisma izay tafiditra ao amin’ ny fivavahana naorin’ i Mohamady, na dia niorim-paka lalina tao amin’ny kolontsaina arabo talohan’ ny finoana silamo aza izany. Maro ireo fanao nalain’ ny mpaminany tamin’ ny mpanompo sampy izay noraisina amin’ ny endriny hafa, ka isan’ izany ny fivahiniana masina sy ny toerana masina misy ny Kaaba.
Kor'any amin'ny teny farantsay (Wikisource):Modifier
Kor'any amin'ny teny anglisy (Wikisource):Modifier
Kor'any amin'ny teny malagasyModifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohamady&oldid=997734"
Dernière modification le 8 Oktobra 2020, à 07:06
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2020 amin'ny 07:06 ity pejy ity.